रात्रीबसको यात्राबारे एउटा मन छुने प्रेम कथा « Light Nepal
रात्रीबसको यात्राबारे एउटा मन छुने प्रेम कथा
Published On : 21 January, 2018 12:38 pm
मन्दिरा मञ्जुश्री म आफ्नो सामान बोकेर हिडेँ । बस स्टेण्डमा पुगेर टिकट काटेँ । विद्यार्थी सहुलियत भाडा दिएपछि मलाई चौध नं.को सिट देखाइदियो । सहुलियत दर भाडा वा रोजिएको अगाडिको सिट दुबैमा मैले एकलाई चुन्नु थियो । मैले सोचेँ- “आखिर गाडि एउटै त हो नि…अगाडि बसे पनि पछाडि बसे पनि के को फिक्री ?”
अरू सिट एकाएक गर्दै भरिन लाग्यो, तर धेरै समयसम्म पनि मेरो सिटमा दाबी गर्न कोही पनि आएनन् । केही क्षणपछि एउटा झुत्रे..काम गरेर खाने जस्तो..सोझो..झुस्स दाह्री जुँगा भएको व्यक्ति नजिकै आएर “पन्द्र नंको सिट यही हैन” भन्यो ? मैले उसको हुलिया र स्थितिप्रति उपेक्षित भावले नाक खुम्चाउँदै आफू सभ्य हुनुको परिचय दिँदै “हो” भन्ने जवाफ दिएँ ।
मेरो भित्री आकाङ्क्षा र चाहना सबै चकनाचुर भयो । कहाँ स्मार्ट युवकको प्रतिक्षा गरिरहेकी म त्यस्तो झुत्रे झ्याउरेसँग यति लामो यात्रा गनुपर्ने…। कसरी दिनभरीको यात्रा यस्तो व्यक्तिसँग बसेर काटौं… । क्या बोर…। म छट्पट्टएि…। निस्सासिएँ…। बस्न नदिउँ भने ऊ उसको सिट दाबी गर्न आइरहेको छ…। दिउँ भने…उफ…!!
म झयालबाट बाहिर देखिने क्रियाकलापहरू हेरिहरेकी थिएँ । ड्राइभर, खलासी, कण्डक्टरहरू नजिकैको पसलमा चिया खाइरहेका थिए । कुल्लीहरू/भरियाहरू गाडीमा सामान लोड गरिरहेका थिए । बाहिर चोकमा कतिपय मान्छेहरू आफन्तलाई गाडी चढाउन आएका र बिदाईका हात हल्लाउँदै गाडी हिँड्ने प्रतीक्षामा उभिइरहेका थिए ।
साना केटाहरू पत्रिका बेच्न कराइरहेका थिए । सडकमा राजधानीबाट बाहिर जाने गाडीहरू ध्र्यार-ध्र्यार गरिरहेका थिए । खलासी र टिकट दलालहरू सम्बन्धित ठाउँको नाम लिएर यात्रुहरू डाकिरहेका थिए । धरान-धरान, विराटनगार-विराटनगर, काँकडभिट्टा-काँकडभिट्टा आदि ।
“कस्तो अनुहारपनि नपरेको मान्छे…। त्यसमा पनि कालो चस्मा लगाएको…। हेर्दा गुण्डाजस्तो…। हैन, अनुहारपनि हुनुपर्छ नि गगल्स लगाउनलाई त…। सुहाओस नसुहाओस् । केटीलाई चिहाई चिहाई हेर्न लगाएको होला नि…।” एक्कासी मनमनै आक्रोस पोखेँ ।
मेरो सहयात्रि पनि निकैबेर पछि ब्युँझियो वा त ब्युँझिएको अभिनय गर्‍यो । “के भयो ?” भन्दै चनाखो भयो । मलाई बोल्न करै लाग्यो- “गाडी जाममा पर्‍यो अरे ।” अरू यात्रुहरूसँगै ऊपनि तल उत्रियो बस्तुस्थिति बुझ्न । एकछिनपछि तल उत्रिएकाहरूले खबर सुनाउन थाले । ऊ पनि अरूलाई भन्दा खासगरी मलाई खबर सुनाउन आयो । “बाटो नै छैन अरे… गाडी जाने त चान्स नै छैन…। पुरै जाम छ …।” उसले सुनाएको यस कुरालाई चाहिँ मैले राम्रै ध्यान दिएर सुनेँ । किनभने यो त मेरो पनि चासोको विषय थियो ।
“कस्तो भोक लागिसक्यो…कतै घर पनि छैन…होटलपनि छैन । दोकान भए त चाउचाउ बिस्कुट किनेर खानुहुन्थो नि…केही पनि छैन” भन्दै सिटमा आएर बस्यो । अहिले मैले बाह्र नंको सिटको अपसकुनलाई सम्झिएँ । एक त मनले नरुचाएको साथी पर्नु, अर्को यस्तो जाममा पर्नु, खान नपाउनु…। सबै सम्झिँदा आठ बाह्र नंले पिर्छ भन्ने आमाको मान्यतालाई मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि सप्रमाण स्विकार्न पुगेँ ।
म छक्क परेँ । हेर्दा त्यस्तो खाते जस्तो छ । पाँच रूपैयाँ पनि मागेर पाउला जस्तो छ तर यत्रो पैसा…? मलाई आश्चर्य साथै डर पनि लाग्यो । जनकपुर हिँडेको भन्दै काँकडभिट्टा जान्छु भन्छ । सामान पनि खास केही भएजस्तो लाग्दैन । फेरी गगल्स लगाएर काग जस्तो देखिन्छ ।
पक्का पनि यो मान्छे गुण्डा हो यता दुइनम्बरी काम गर्ने हो । कि त केटी बेच्ने दलाल पो हो कि…? नत्र किन यसले यत्रो पैसा बोकेको छ ? कहाँबाट ल्याएको होला यत्रो पैसा ? यस्तो खाते जस्तो मान्छेले ?? मलाई त ऊ देखि झन डर लाग्यो । कतै यसले बिभिन्न उपायले, तरिकाले मलाई पनि बेच्न लग्यो भने ? भयंकर शङ्कालु प्रश्न म आफैभित्र उब्जियो । “गाडीमा अपरिचितले दिएको कुनै पनि खानेकुरा नखानु” भन्ने कुरा सम्झेँ ।उसले पनि मलाई बाध्यतावश कुनै कुरा झुक्याएर खुवाउन सक्छ । बेहोशीमा ललाएर, फकाएर लैजान र बेच्न पनि त सक्छ ।
मैले ऊ निदाएको मौका पारेर उसलाई नियालेर हेरेँ । थोरै कालो वर्णको…दाह्री जुँगा काटेको छोटो छोटो कपाल राखेको । मान्छे खासै नराम्रोचाहिँ हैन रहेछ । उचाई, शरीरको बान्की, अनुहारको बनौट पनि ठीकै रैछ नियालेर हेर्दा त । लुगा पनि साधारण । सेतो रङको कोठा कोठा भएको हाफसर्ट र खैरो रङको पाइन्ट लगाएको । अहिलेसम्मको उसको गतिविधि र पहिरन, बनावट, बोलाई, सबैको मुल्यांकन गर्दा ऊ मैले सोचेजस्तो फटाहा हैन रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई । कता कता ढुक्क भएँ । त्यसैले मपनि अब निदाउने बहाना गर्नथालेँ । त्रिशुलीको लेदो पानी र पारी देखिने जंगलको दृष्यले मेरो आँखा पनि पोलिरहेको थियो ।
बामे सरेर पाँचबजे बल्ल नारायणगढ आइपुग्यो र रोकियो गाडी थचक्क । सबै यात्रुहरू चल्मलाउन थाले र उत्सुकतावश झयालबाहिर हेर्नथाले । ऊ पनि ब्युँझियो र गगल्स निकाल्यो आँखा (पुच्छ्यो) मिच्यो । मैले त्यसबेला देखेँ, उसको एउटा आँखा त पुरै सेतो पो रहेछ । सायद फूलो परेर बिग्रेको होला । त्यसैले पो उसले गगल्स लगाएको रहेछ । बल्ल मलाई थाहा भयो उसले गगल्स लगाएको वास्तविकता…। यसबेला मलाई मेरो शङ्का र उसप्रतिको उपेक्षाप्रति झिनो पश्चाताप लाग्यो…। नारायणघाट सुरुसँगै मूसालधारे पानी पर्‍यो । असिना झर्‍यो त्यसैले एकाध घण्टा गाडी रोकियो । असिना र्झन छोडेपछि पुनः गाडी अगाडि बढ्यो । सबैको इच्छा केही खाने थियो । दिनभरिको गाडीको बसाई र भोकले यात्रुहरूको बोल्न सक्ने शक्ति क्षीण भइसकेको थियो । ड्राइभरले पनि सानैदेखि ठूलोसम्म सबै होटलमा गाडी लग्यो तर मुसलधारे पानी र कुबेला भएकोले यात्री सबैलाई पुग्ने खाजा/नास्ता समेत कतै पाइएन । पुनः लाचार भएर ड्राइभरले गाडी अघि बढायो ।
सधैँ यसबेला आˆनो गन्तव्यमा पुग्ने गाडी आज त्यो समयमा लगभग आधा बाटोको दुरीमात्र पार गरेको थियो । यसपछि गाडीले तीव्र बेग लियो । चन्द्रनिगाहपुर पुग्दा रातको दश बजेको थियो । त्यहाँपनि खाना पाइएन । एउटामा मात्र अघिल्लो बसका यात्रुले खाएर बाँकी रहेको खाना भेटियो । नपाउनु भन्दा जेजस्तो भए पनि त्यहि खाने भनेर सबैले खाना खाए । मेरो सहयात्री पनि गयो र मलाई पनि आग्रह गर्‍यो खान जान । मैले नखाने भनेँ । मैले आफूसँगै भएको खानेकुरा खाएँ । ऊ खाना खाइसकेर आयो र सहयात्री हुनुको कर्तव्य निभाउँदै मलाई पनि एउटा फ्रुटी र चटपटे ल्याएर दियो । म झसङ्ग भएँ “अपरिचितले गाडीमा खान दिएको नखानु” भनेको सम्झेँ । फेरि मेरो मनले अघि नै उसलाई केटी बेच्ने दलालसम्म सम्भिmसकेको छ । कतै ऊ त्यही त हैन ? फेरि खानेकुरामा बेहोस पार्ने औषधि मिसाएको त छैन ? अब त झन् रातको समय छ मैले थुप्रै कुराहरू सोचेँ र खान्न भनेँ ? उसले अनुरोध गर्दापनि मैले खाएको भनेर लिँदै लिइनँ । उसले त्यो आफै खायो । मेरो डर अलिक कम भयो । उसले आफै खाएकोमा ढुक्क भएँ ।
“सरी है” भन्दै उसले आफ्नो हातमा भएको ब्यागले मलाई घचेटेर उठाउने कोशिस गर्यो । मैले झसङ्ग भएर ब्युँझिएको अभिनय गर्दै सचेत भएझैँ गरेँ । थुइक्क मोरा ! कमसेकम हातले छोएको भए त हुने । कति रमाइलो हुन्थ्यो होला । मनमनै कुडिएँ म । मलाई उप्रति एकातिर झन् रिस उठिरहेको थियो भने अर्कोतिर एकदम श्रद्धापनि लागिरहेको थियो ।
ऊ गइसकेपछि सिट हेरेँ। मलाई मेरै आत्मीय जनसँगको बिछोडको अनुभुति भयो । बिचरा ! रातको दुईबजे सुनसान सडकमा कहाँ जान्छ होला ? उज्यालो हुन्जेल कहाँ बस्छ होला ? उसँग यत्रो पैसा छ कतै कसैले केही गरे भने…?? मलाई उप्रति सहानुभुति भयो । मैले अनुभव गरेँ…। वास्तवमा नै बाह्र नं.को सिट नै नफाप्दो रहेछ । गन्तब्यमा पुगेर गाडी रोकियो मैले आˆनो प्यारो बाह्र नं.को सिटलाई त्यसैगरी मन नलागी नलागी छोडेँ, जसरी मैले काठमाडौँ, थानकोट, कृष्णभिर, त्रिशुली…नारायणघाट, हेटौडा लगायत बाइस घण्टाको सहयात्रीलाई छोडेकी थिएँ ।